Horudhaca kulanka caawa ee League Cup kooxaha Burton Albion vs Liverpool – Gool FM
(Burton upon Trent) 23 Agoosto 2016 – Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa caawa la ciyaari doonta naadiga Burton Albion kulan ka tirsan wareegga labaad ee League Cup, waxaana macallin Klopp iyo wiilashiisu ay doonayaan inay ka soo kabsadaan guuldarrii dhowaan ka soo gaartay kooxda Burnley ee Premier League.
Kooxaha: Burton Albion vs Liverpool
Tartanka: Wareegga labaad ee League Cup
Garsooraha: Simon Hooper
>- Waa markii ugu horreysay oo ay kulmaan taariikhda labadaan kooxood Burton Albion iyo Liverpool.
>- Liverpool ayaa guuldarro la’aan ah 12-kii kulan ee ugu dambeeyay koobka League Cup-ka ay la ciyaartay kooxaha darajada hoose (8 guul ayey gaartay, halka 4 jeer ay barbaro gashay).
>- Burton kaliya labo jeer ayey wajahday kooxo ka socda heerka koowaad ee Premier League saddexdii xilli ee ugu dambeysay tartankaan, waxay garaacday QPR 2014/2015, laakiin waxa ay guuldaro gool ku laadyo ah kala kulantay Fulham xilli ciyaareedkii 2013/2014.
>- Liverpool ayaa gaartay afar dhammaadka tartankaan saddex ka mid ah shantii tartan ee ugu dambeeyay ee ay ciyaartay league Cup, oo ay ku jiraan labo jeer oo ay gaartay final-ka, waxay ku guuleysteen 2012, laakiin waxa ay guuldarro gool ku laadyo ah kala kulmeen Man City xilli ciyaareedkii hore.
Falanqeynta kulanka caawa ee League Cup kooxaha Chelsea vs Bristol Rovers